How2using Photoshop to Create the Illusion of Depth of Field
Tags: ဒီလိုဗျာ ... Step 1 ... ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားက food count တစ်ခုမှာ ... Shutter Speed :- 1/500 Aperture :- f/5.6 ISO :- 200 Lens :- AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G နဲ့ ပုံလေးကိုရိုက်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော်သံ
iPhone ၏ အသစ်ထွက်ရှိမည့် OS အသစ် iOS 4.1 တွင် HDR ပုံများအလွယ် ရိုက်လို့ရတော့မည်
Tags: ရှေ့တစ်ပါတ်အတွင်း release လုပ်မည့် Apple ၏ မိုဘိုင်း OS ဗားရှင်းအသစ် (iOS 4.1) တွင် iPhone ဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် အလွန်လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် HDR feature အသစ်တစ်ခု ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။ HDR process ဖြစ်
Basic Photography (အခြေခံ ဓာတ်ပုံပညာ)
Tags: ၁၈၃၉ ခုနှစ်မှာ သိပ္ပံပညာရှင် Sir John F.W. Herschel က Photography ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Photography ဆိုတာက ဂရိဘာသာစကား Photos(light=အလင်း) နဲ့ Graphein (to draw = ပုံရေးခြင်း) ဆိ
Tags: ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ကင်မရာတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို အစအဆုံးလေ့လာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးဆုံးနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်က ဘာတွေတီထွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိတီထွင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ဗဟု
Tags: လက်ထဲကို ကင်မရာကြီးရောက်လာတော့ အရင့်အရင်က ကိုယ့်ထက်ဝါရင့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဟိုမေးဒီမေးလုပ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ လက်လှမ်းမီ သလောက်ရှာဖွေကြည့်၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေလိုက်ရှာ၊ ကင်မရာနဲ့ ဟိုရိုက် ဒီရိုက်၊ ဟိုချ
Tags: ဒီ mode လေးများကို semi-automatic mode လို့ ခေါ်သလို semi-manual mode ဟုလည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။
သင်က aperture setting ကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးနေစဉ်၊ သင့်၏ camera က balanced e
Tags: What is Shutter Speed? shutter speed ဆိုသည်မှာ တိုတိုနှင့်ထိေ၇ာက်သောစကားကိုသုံး၇၇င် ...‘the amount of time that the shutter is open’ ပင်ဖြစ်ပါသည်။Shutter speed သည် seconds ပေါ်တွင်အခြေခံပြီး
Outing @ Choa Chu Kang Cemeter.
Tags: ဇာတ်လမ်းအစကတော့ဒီလိုပါ။မသက်စုရဲ့ စင်္ကာပူမှ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာများ ဆိုတဲ့ post လေးမှာ ကိုစည်သူပေးထားတဲ့ comment လေးကနေစပါတယ်။အဲ့ဒီ comment လေးမှာ ကိုစည်သူကဒီလိုရေးထားပါတယ်။u should go to chua chu kan
Making Panaroma in Photoshop using "Automate"
Tags: Photoshop ကို လေ့လာသင်ယူနေတာတော့ နည်းနည်းကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်လောကမှ Photoshop ထဲမှာ panoramic လုပ်လို့ရမှန်းသိတယ်။ Panoramic လုပ်လို့ရတဲ့ software တွေရှိပါတယ်။ Photoshop နဲ့ သုံးလိုသူများ သုံးလို့ရ
Filter Types And Their Usage
Tags: ယနေ့ အသုံးများတဲ့ Filter types တွေက UV Filters တချို့စာအုပ်တွေမှာ Haze Filter လို့လဲသုံးပါတယ်, Linear & CircularPolarizers ရယ်၊ Neutral Density (ND) ရယ်၊ Graduated Neutral Density (GND) ရယ်၊
21-30 of 74	Per page: 5